देशभर २१२ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण, कहाँ - कति ? (विवरणसहित)
स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण किन बढी ?
श्रावन ३१, २०७७ १५:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग लड्न सबैभन्दा नभइ नहुने व्यक्तिहरु स्वास्थ्यकर्मीहरु नै हुन् । संक्रमितहरुको कठिन परिस्थितिमा आशा, भरोसाका केन्द्र पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । अहिले देशभरका विभिन्न अस्पतालमा धमाधम चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। गम्भीर अवस्थामा पुगेका संक्रमित तथा अन्य रोगका जटिल बिरामीको उपचारमै समस्या उत्पन्न हुने अवस्था आउने होकी भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ ।
संक्रमण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नै पर्‍यो। उनीहरुको सम्पर्कमा आएका अन्य स्वाथ्यकर्मी, चिकित्सकहरु तत्काल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने हुँदा स्वत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइहाल्छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरु खाली हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ। संकटपूर्ण अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमणबाट जोगिएनन् भने जतिनै स्रोत, साधन भएपनि उपचार गर्न कठिन हुन्छ । बिरामीलाई बचाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मी जोगिएमात्रै अन्य बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साउन ३० गतेसम्मको आँकडाअनुसार हालसम्म देशभर ४१ डाक्टर, ३२ जना स्टाफ नर्स, १२ प्रयोगशालाकर्मी गरी २१२ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीसहित ५५ जना कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीहरु समुदाय तथा बिरामी र कार्यक्षेत्रबाट संक्रमणको जोखिममा रहेको बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनैपनि समय जस्तोसुकै अवस्थामा जुनसुकै बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ।, सुरुमा बिरामीलाई संक्रमण छ कि छैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन’उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले उनीहरुलाई संक्रमण हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ।’
जुनसुकै बेला पीपीई लगाउन नसकिने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरु मास्क र पञ्जाको भरमा बिरामीहेर्दा डाक्टर, नर्सलाई संक्रमण भएको पाइएको छ जबकी अस्पताल भर्ना भएपछि स्वाब लिदा बिरामीलाई पोजेटिभ देखिन्छ। यस्तै केसका कारण धेरै डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भइरहेका छन् सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीबाट उनीहरुका घरपरिवार तथा अन्य बिरामीलाई पनि भाइरस सरेको उहाँले बताउनु भयो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा.मंगल रावलले अहिलेको अवस्थामा अस्पताल नै संक्रमणको स्रोत भइरहेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानमा उपचारत बिरामीमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएकाहरुको पीसीआर परीक्षण गर्दा २ डाक्टरसहित ८ स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण भएको जानकारी रावलले दिनुभयो । ‘अस्पतालमा आउने अन्य बिरामीहरुबाट नै स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण भइरहेको छ त्यसैले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अस्पताल जान सर्वसाधरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।’ रावल भन्नुहुन्छ ।
कोरोनाको हटस्पट क्षेत्र वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका १० जना डाक्टर तथा ९ नर्ससहित ६९ जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । यस अस्पतालले अहिलेसम्म करिब ११ सय संक्रमितको उपचार गरिसकेको छ । नारायणी अस्पतालका मेसू डा.मदन उपाध्यायले पीपीई लगाउँदा लगाउदै स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुनुले पीपीइको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले पीपीईको गुणस्तरीयता मापन गरेका छैनाँै, त्यसैले पीपीई लगाएको भन्दैमा संक्रमण हुँदैन भन्न सकिन्न । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीसँग पटक–पटक लामो समयसम्म घुलमिल हुनुपर्दा संक्रमण हुनेगरेको उपाध्याय बताउनु हुन्छ ।
यसैगरी समुदायमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य सेवामा खटिने क्रममा संक्रमणमा पर्नुभएकी बाँके खजुराकी स्टाफ नर्स लक्ष्मी केसी ओलि पर्याप्त पीपीई प्रयोग नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित हुने गरेको बताउनुहुन्छ। सरकारले उनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा पीपीई उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सही तरिकाले पीपीई लगाई काममा खटिनपर्ने उहाँको भनाई छ । केसी हाल संक्रमणमुक्त भई आफ्नो नियमित काममा लागिरहनुभएको छ ।
हालसम्म विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना पुष्टि भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको विवरण :